ချာတူးလန် မြန်မာစစ်ကားများ | အိမ့်မှူးသော်
တကယ်ဆို ၁၉၈၈ တိုင်းပြည်ပျက်ဖို့ လက်တလုံးခြား စသဖြင့် အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ ပြောနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေအစား ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတုန်းက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ စစ်သား/အရာရှိငယ်လေးတွေ ခံစားချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ပြသင့်တယ်။ တဖက်က ချီတက်လာတဲ့ ရဟန်းရှင်လူတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့လက်ထဲမှာ ခဲတွေ တုတ်တွေ ကိုင်ထားတာ ပြီးတော့ စည်းကျော်ရင် ပစ်ရမယ်လို့ပေးထားတဲ့ အမိန့်၊ ဒါတွေကိုလွန်ဆန်ဖို့ကြတော့ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ဆိုတဲ့ စစ်ဥပဒေ စသဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာထဲမှာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေပုံတွေကို ရိုက်ပြသင့်ပါတယ်။ ခုတော့ တခါလာလည်း နားကြားပြင်းကတ်စရာ နိုင်ငံတော်တာဝန်မလွှဲမရှောင်သာရယူ တခါလာလည်း လက်တလုံးခြားက ကယ်တင်နဲ့ပဲ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေတာပါ။ ပြည်သူလူထုမဆိုထားနဲ့ အဲ့ဒီ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ စစ်သားရင့်မာကြီးတွေတောင် စစ်တပ်ကို အမြင်ကတ်နေကြရတယ်။ တကယ်တမ်း အဖြစ်မှန်တွေကို ပြည်သူတွေကို ချပြနိုင်မယ့် စစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းထွက်လာမှာကို အမြဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ စစ်ကားတကားထွက်တိုင်း မြန်မာ့ရုပ်သံမှာစောင့်ကြည့်ပေမယ့် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဇာတ်ကားတွေကိုပဲတယ်။ ကျွန်တော်ချစ်သော/မွေးကတည်းက ကြီးပြင်းခဲ့ရာ အမိတပ်မတော်ကို လူအမြင်ကတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ မီဒီယာတွေကို အမြဲတွေ့နေရလို့ ကျွန်တော် ဒီဝေဖန်စာကို ရေးသားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။။။။။
ဒေါက်တာ ကိုကိုဦး (မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြသည်)
Aung Thu 11:16 AM
အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား။ ဆန်မရှိ $ စားကြီး၊ ၀ိမရှိ ၀ိလုပ်ကြသောခေတ်၊ လူသာသေရင်သေသွားမယ် လေတော့မရှော့နိုင်ပေါင်။
Very good post.ခင်ဗျားရေးတာတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်စစ်ကားဆိုတာ စစ်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုပေါ်လွင်အောင်၊ စစ်သားတွေရဲ့စရိုက်သဘာဝ တစ်နည်းအားဖြင့်လူ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ရမှာပါ။
အခုတော့ ပုဂံရာဇဝင်၊တောင်ငူရာဇဝင် အစရှိသည်ဖြင့်ကြီးကျယ်ခဲ့တာတွေက အနုပညာမမြောက်တဲ့ဖန်တီးချက်တွေကြောင့်ငမြောက်ငခြောက်ရာဇဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။
Uѕually the casino bonus could maκeaperson аn deliver of аny pеrsonal credіt line oг aсcordіng to pгecіsely how nicely you do
this casino bonus may ροѕsibly offer tο
get youabedroom wіth the evening.
The item is due to the partіcular ѕtгοng taste of mеn аnd wοmen οf which manufаcturers keep ԁuplісating thіs kind оf thеmе in numеrous еxhibits.
caѕinо bonuѕ has been produced into your collесtion together ωith cheѕs.
There's also many web-sites whereby you'll want to get intοanumber οf
get tοken insiԁe саsino bonus sport software progrаm,
then play while using the freе funds.
AUNG MYO KYAW 2:39 PM
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ဝေဖန်ချက်ပါဘဲ။ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာဗျာ။Thank you.